Austin ၏တောင်းဆိုမှုများရှိသောရုပ်မြင်သံကြားစက်အတွက် BeckTV သည် HD Video များအားပြုပြင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » BeckTV စီးတီးရဲ့ Austin ၏ဝယ်လိုအားရုပ်မြင်သံကြားစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ချွေ, HD ဗီဒီယိုအလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့ Designs
BeckTV စီးတီးရဲ့ Austin ၏ဝယ်လိုအားရုပ်မြင်သံကြားစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ချွေ, HD ဗီဒီယိုအလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့ Designs
Austin, Texas ပြည်နယ် - ဇန်နဝါရီ 26, 2016 - BeckTV, United States ကို '' ဝန်ကြီးချုပ်ဒီဇိုင်း-တည်ဆောက်စနစ်များပေါင်းစည်းများထဲမှယနေ့က ATXN မှာ Austin, Texas ပြည်နယ်၏မြို့အဘို့အစိုးရကတီဗီရုပ်သံလိုင်းတဲ့စနစ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးစီးခဲ့ပါသည်ကြေညာခဲ့သည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမာစတာထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဆန်းသစ်တဲ့တတိယထိန်းချုပ်မှုအခန်း၏ထို့အပြင်မှတစ်ဦးအဆင့်မြှင့်ပါဝင်သည် HDဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်များတိပ်ကနေပြောင်းလဲခြင်းနှင့် high-quality အချက်ပြမှုများစီးဆင်းရန်လုံလောက်သော bandwidth ကိုဗီဒီယိုစစ်ဆင်ရေးထံအပ်နှံအသစ်တစ်ခုကွန်ယက်ကို။ BeckTV ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အရင်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေး programming ကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ ATXN နိုင်ပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းထိန်းချုပ်မှုအခန်းထဲမှာအလုပ်-န်းကျင်နှင့်လက်စွဲစာအုပ်ခြေလှမ်းများ၏အပြည့်အဝမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖန်ဆင်းသောစံနှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်ခေတ်မမီတော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများအများစုဟာမရှိတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် upkeep ခက်ခဲဖန်ဆင်းသော, အထုတ်လုပ်သူများကထောက်ခံခဲ့သည်။ နှင့်ပြဿနာများရှိခဲ့လျှင်, ကထောက်ခံမှုရဖို့ကမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရပုံကိုထုတ်တွက်ဆရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်, "Keith ရိဗ်, ATXN ဘူတာရုံမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ "အခုဆိုရင် BeckTV ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကျေးဇူးတင်ကျနော်တို့ကိုအများကြီးပိုမြင့်အရည်အသွေးထုတ်လွှင့်အချိန်ကုန်သက်သာ, ငါတို့ထုတ်လုပ်သူသူတို့လုပ်ဖို့ငှားရမ်းထားခဲ့ကြသည်အလုပ်အကိုင်လုပျဆောငျဖို့လွှတ်ပေးခြင်းပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ကောင်းစွာ-ဖွဲ့စည်းသည့်စနစ်ရှိသည်။ ထိုလူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး, ငါတို့သည်ပစ္စည်းအားလုံးအတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်လေထုကိုစောင့်ရှောက်မည်ဟုသိမှတ်ယုံကြည်မှုပါပဲ။ "
တစ်ဦးတည်းသာအော်ပရေတာများက run နေကြသည်နှင့် 12 နာရီထက် ပို. ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်အများအပြားရာ၏ - ATXN မပြတ်မတောက်အားလုံးစီးတီးကောင်စီလွှမ်းခြုံ, ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်မြို့တော်ခန်းမအပေါင်းတို့နှင့် Austin ကျော်အမျိုးမျိုးသောဝေးလံသောနေရာများမှာအရပျကိုယူကြောင်းကော်မရှင်အစည်းအဝေးများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်လလျှင် 45 အစည်းအဝေးထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တစ်နှစ်လျှင် 280 လယ်ကိုဘဏ်ဍာအတူတက်ထားရန်, ATXN ရဲ့ပန်းတိုင်များ, ထုတ်လုပ်သူပြင်ဆင်ရန်ဘူတာမှမာစတာထိန်းချုပ်မှုချိတ်ဆက်ကော်ပိုရိတ်အိုင်တီကွန်ယက်၏ချွတ်ရ, ပြင်ဆင်ရန်ဘူတာအကြားဝေစုသိမ်းဆည်းခြင်း, သွင်း၏အရည်အသွေးနှင့်လွယ်ကူခြင်းတိုးတက်လာဖို့ခဲ့ကြသည် ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်ကို၎င်း, Real-time စားသုံးမိ၏မျက်နှာသာအတွက်ဗီဒီယိုတိတ်ခွေကိုဖယ်ထုတ်။ ATXN ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ချင်ခဲ့တယ် HD အရည်အသွေး။
ကလိုအခြေခံပစ္စည်းကိရိယာများသုတေသနပြုပြီးနောက် ATXN, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်လုပ်မယ်လို့ညီညွတ်ပေါင်းစည်းစနစ်အတွက်ဒီဇိုင်းစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှုများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဆီးတားခြင်း, တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်စစ်ဆင်ရေးမှသူ့ဟာသူချေးငှားဖို့ BeckTV ဌနာ။
"BeckTV အားလုံးတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းထိန်းချုပ်မှုအခန်းပေါင်းရာပေါင်းများစွာကို install ထားပြီး, ကြှနျုပျတို့ကြောင်းကျွမ်းကျင်မှုငါ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်ကသုံးစွဲဖို့နိုငျခဲ့ကွ," ရိဗ်ကဆက်ပြောသည်။ "BeckTV စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့နားထောင်နောက်ဆုံးမှာပြန်ထိန်းချုပ်ခန်းမှအစည်းအဝေးခန်းသို့မဟုတ်စတူဒီယိုထဲကနေအချက်ပြပို့ဘို့ငါတို့ရည်မှန်းချက်ကြီးကျန်တာတွေမပြည့်စုံကြောင်းတဲ့စနစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးတော့အပေါငျးတို့သဖြန့်ဖြူးအချက်များထွက် - စီးတီးရှိလေးခုကွဲပြားခြားနားသော cable ကိုပံ့ပိုးပေး, closed-circuit ကို TV ကမော်နီတာအပါအဝင် ခန်းမ, သုံးယောက်က်ဘ်စီး။ "
BeckTV တစ်ခုတည်းအော်ပရေတာလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ခွင့်ပြု built-in အလိုအလျောက်အတူသုံးထိန်းချုပ်ခန်းနှင့် ATXN ရဲ့ပန်းတိုင်အားလုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတစ်ဦးမာစတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ဥပမာ, စနစ်သစ်နှင့်အတူတစ်ဦး ATXN အော်ပရေတာ, ကင်မရာရိုက်ချက်များမှတ်မိ CG စာသားကိုတက်မခေါ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကိုထိသဖြင့်လေကောင်းလေပေါ်အကြောင်းအရာထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ထိရောက်မှု၏အခြားဧရိယာများတွင် BeckTV ထုတ်လုပ်သူများတည်းဖြတ်အစုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကြမ်းပြင်ပေါ်ထိန်းချုပ်မှုခန်းအကြားတိပ်ခွေသို့မဟုတ်ဒီဗီဒီသယ်ယူပို့ဆောင်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်တဲ့ကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဲဒီအစားအော်ပရေတာရိုးရိုးကွန်ယက် folder မှတည်းဖြတ်ဖိုင်တွေဖမ်းပြီးပလေးအောက်အဘို့ထိုသူတို့အချိန်စာရင်းနိုင်ပါတယ်။
BeckTV အသစ်တစ်ခု Ross က Extreme installed HD Router ကနှင့်ဖြန့်ဖြူး, ပြင်ဆင်ရန်မှာများနှင့် QC ပစ္စည်းကိရိယာများ။ အဆိုပါသုံးထိန်းချုပ်ခန်း ATXN 17 ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုထားသည့် Ross ကဥပဒေပြုထိန်းချုပ်ရေးစနစ် (LCS), ကို အသုံးပြု. ရော့စ် Carbonite တို့ Switcher အပေါ်အားကိုး Sony က PTZ ကင်မရာများ, ထိုခလုတ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, တဦးတည်းထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကနေရော့စ်ဖော်ပြမှု CG ။ တစ်ဦးက Wheatstone အသံ-over-IP ကို ​​console ကိုအားလုံး MICS သုံးယောက်ခန်းအကြားမျှဝေဖြစ်ကြောင်းသေချာ။ BeckTV လည်းတစ်ခု, မာစတာထိန်းချုပ်မှုအပေါ်-လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ရပ်နားတာအလိုအလျောက် installed EditShare စီးဆင်းမှုကိုစားသုံးမိဘို့ဆာဗာနှစ်ခု EditShare On-ဝေဟင်ပြန်ဖွင့်ဘို့အ Geevs ဆာဗာများ။ တစ်ဦး EditShare archive ကိုနှင့် RAID system ကို ATXN ရဲ့အယ်ဒီတာများ postproduction တည်းဖြတ်ရေးနဲ့ content ဖန်ဆင်းခြင်းများအတွက်ဆာဗာများပေါ်မှာရှိသမျှသောအကြောင်းအရာများကိုဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင် system ပေါ်တွင်မှီခို Tightrope မီဒီယာစနစ်များ On-ဝေဟင်လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်နှင့်သုံး stream မှ Swagit ဆော့ဖ်ဝဲ HD channel များကိုအသက်ရှင်နေထိုင်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ကိုကျော်ဝယ်လိုအားပေါ်မှာ။
"ATXN တိုင်းပြည်အတွက်မဆိုအခြားမြို့ထက် သာ. အစည်းအဝေးများ televises ။ အခုတော့ ATXN လူတစ်ဦးကို run ဖို့အတှကျလုံလောကျရိုးရှင်းတဲ့သော ပို. ထိရောက်လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူရှည်လျားပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်အညွန့်များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်မထိန်းချုပ်ခန်းရှိပါတယ် "ဟုအာဗေလ Sassenhagen, BeckTV မှာစီမံကိန်းကိုအင်ဂျင်နီယာကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းနောက်ကွယ်မှတပြင်လုံးကိုစိတ်ကူးရိုးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ 12 နာရီအညွန့်လိုက်လျောညီထွေနိုင်ဖို့အတွက်ငါတို့ကဲ့သို့များများစားစားအဖြစ် humanly ဖြစ်နိုင်သော automated ့အမှု၌သုံးဆ-စံချိန်ရန်သင့်သိမ်းဆည်းချက်တွေကိုအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ATXN installation ကိုဒေသခံအစိုးရအသံလွှင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှသောအရာကိုတစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဥပမာဖြစ်၏။ "
BeckTV အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.becktv.com.
BeckTV (ယခင် Beck Associates မှ) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု '' ဝန်ကြီးချုပ်ဒီဇိုင်း-တည်ဆောက်စနစ်များပေါင်းစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံထက်ပို 30 နှစ်ပေါင်းနှင့်အတူ, BeckTV အခြားမည်သည့်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်ထက်ပိုဖောက်သည်များအတွက်ပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရုပ်မြင်သံကြားအဆောက်အဦဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အိမ်များဖို့နီးပါးတိုင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်များကနေလျှောက်လွှာဒေသခံတီဗီဘူတာ, အားကစားကုန်တင်ကားများနှင့်အားကစားကွင်းနေရာများမှာတော့ BeckTV အချိန်ပေါ်နှင့်ဘတ်ဂျက်အပေါ်အောင်မြင်သောရလဒ်များ, အာမခံဖို့ပူးပေါင်းချဉ်းကပ်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ Denver, နယူးယောက်, Austin, Texas အတွက် Full-ဝန်ဆောင်မှုရုံးများထိန်းသိမ်းထားသည်။ BeckTV အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.becktv.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/BeckTV/BeckTV_City-of-Austin-City-Hall.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: မြို့တော်ခန်းမ, Austin တက္ကဆက်
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/BeckTV/BeckTV_Control-Room-at-ATXN.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: ATXN, Austin ၏မြို့အဘို့အစိုးရကတီဗီရုပ်သံလိုင်းမှာထိန်းချုပ်ရေးအခန်းထဲမှာ
BeckTV ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Austin ၏စီးတီး ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် HD ဗီဒီယို တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-01-26
ယခင်: Frixxer နှင့် Youtoo အမေရိကတိုက် Juke Superbowl ကြော်ငြာ
နောက်တစ်ခု: Automated စတူဒီယိုများအတွက် Virtualization ၏အကျိုးကျေးဇူးများ